Ukugcina amabhizinisi exhunywe namakhasimende abo emhlabeni wonke.
Ikhadi lebhizinisi lokugcina lebhizinisi elikhulayo
Ukuxhuma Amabhizinisi Kubathengi
Ukumaketha ezandleni zakho
Ukunikeza Abathengi, abasebenza ngokuzimela, osomabhizinisi, kanye nabasebenzi bebhizinisi ithuba lokwenza ibhizinisi noma yikuphi ngaphakathi kwendlela yabo yokuphila okumatasa.
Kuhle ukukhulisa nokukhulisa ibhizinisi lakho
Ukunikezela Ngesevisi Yamakhasimende Eyinombolo 1
I-SphereCard kulula ukuyisetha ngemizuzu, kepha uma umatasa singakusethela yona. Mane uxhumane nabasekeli.
Imininingwane eyabiwe ngaphakathi kohlelo lwethu ibhalwe ngekhodi ngendlela yokuthi amaqembu agunyaziwe kuphela angayithola.
Sihlala sithola izindlela zokwenza usebenze ngejubane nokusebenza kahle.
Ukufinyelela okulula ngeWebhu noma uMhlahlandlela Weselula
“Ngithanda umyalezo oqondile onesaziso. Ngincamela ukuyisebenzisa ngaphezu kwe-imeyili. Kubalulekile kimi ukuthi amaklayenti ami angalayisha amadokhumenti futhi awathumele ngqo kimi ngaphandle kokuthi awathole phakathi kwama-imeyili amaningi noma aqondiswe kubhokisi logaxekile. Inginika isikhungo semiyalezo yokuthengiselana esidayisa izindlu nomhlaba. "
“Benginokungabaza okuncane ngokuthenga kodwa intengo ibiyiconsi ebhakedeni. Ngiyajabula ngokuthi ngikwenzile lokho. Ngikuthathe kancane. Kungenza ngizimakethe ngisho ngokungazi futhi ngihlele imisebenzi ejwayelekile manje njengoba sekuyinto yesibili ukuyisebenzisa. "
“Ngisithanda kakhulu isici se-Share. Kwenza kube lula kimi ukuthola igama nenombolo yomuntu engabelana naye nge-MYSphereCard. Imvamisa, ngikhipha amakhadi ami webhizinisi futhi ngivame ukubuza inombolo yomuntu kepha manje ngigcina igama labo nenombolo yocingo ohlwini lwami lokuxhumana ngenkathi ngabelana. Lolu hlelo lokusebenza lunezici eziningana ezihlukile engisazithola zonke izinzuzo. Kuhle."
Isilingo Samahhala Sezinsuku ezingama-30 ngoHlelo Lwezinyanga
Wonke umuntu oqala ibhizinisi udinga ukwaziwa, futhi into eyodwa engabizi kakhulu abantu abathembele kuyo ukukhipha igama ngamakhadi ebhizinisi. Kodwa-ke, kunezingqinamba kumakhadi wephepha amadala. Ukwenza ushintsho kulwazi oseluphrintwe izikhathi eziningi kwenza umnikazi wekhadi alahlekelwe amakhasimende futhi kubenze bazizwe sengathi baqala phansi njalo. Isikhala samakhadi ebhizinisi sinqunyelwe ekunikezeni ikhasimende elingaba khona umbono omuhle wamandla omnikazi webhizinisi. I-SPHERE CARD, LLC inhloso kuphela ukuthuthukisa ulwazi lwekhadi lebhizinisi langaphambilini. Ngobuchwepheshe bethu, sithuthukile ezintweni ezinhle ezenziwa yikhadi lebhizinisi.